Indoda engenabani ishe nendlu ilele yashona | IOL Isolezwe
Indoda engenabani ishe nendlu ilele yashona
Isolezwe / 2 January 2013, 2:17pm / BONISWA MOHALE
UNKK Theresa Nzama waseNkomeni ngaKwaMakhutha ekhomba lapho kushe khona owesilisa obethunywa endaweni kodwa ezingaziwa izihlobo zakhe. Kuthiwa umufi ufe emuva kokushiswa wumlilo wekhandlela
KUFUNWA izihlobo zikaMakhehlane okungaziwa ukuthi udabuka kuphi. Lo mlisa utholwe eshonile emuva kokushiswa ngumlilo endlini abelele kuyo Isithombe :SITHUNYELWE
USHAQEKILE umndeni wakwaNzama eNkomeni, ngaKwaMakhutha, emva kokutholakala kwendoda ishile kwenye yezindlu zakuleli khaya.
Amalungu omndeni izolo avuswe yindodakazi yawo ebiphuma emvuselelweni ikhala ngokuthi kuyasha ezindlini ezingaphandle nokuthe uma beyobheka bathola ukuthi kusha indlu ebilele indoda okuthiwa ibivame ukuthunywa ngabantu bendawo futhi nezihlobo zayo kazaziwa.
Ngokusho kukaNkk Theresa Nzama (89) umufi ubebizwa ngoMakhehlane (29) kanti ubengumuntu ohlala emgwaqweni noma alale noma kuphi lapho ethola khona indawo.
Uthe basathukile namanje ukuthi ufele endlini ngoba bebengazi nokuthi ukhona endlini yakhe ngoba ubehambe elala noma yikuphi lapho ethanda khona.
“Okusikhathazayo wukuthi asazi ukuthi ngowakuphi noma izihlobo zakhe ngobani. Ubengumuntu ongaphilile kahle emqondweni kanti besifisa ukuzibona izihlobo zakhe,” kusho uNkk Nzama.
Uthe basola ukuthi umlilo uqalwe yikhandlela umufi azumeke likhanya. Kushe indlu okushonele kuyo uMakhehlane kuphela ezinye ezimbili ezilala abafana bakwaNzama azishanga. Abantu bendawo bathe kusize ukuthi ugesi ubungekho ngoba ngabe ushe wonke umuzi wakwaNzama.
Bakhale ngokudembesela kwamaphoyisa aKwaMakhutha bethi yize umufi eshe ngabo-5 ekuseni izicishamlilo zafika masishane wona kudingeke ukuthi alandwe ngabo-10 ngabakwaNzama engezi ukuzobheka ukuthi kwenzenjani.
“Asazi ukuthi kufanele sibikele bani uma sinenkinga kanti lana ngoba amaphoyisa aKwaMakhutha azithela ngabandayo uma siwadinga.
“Sicela izikhulu zawo zilubheke lolu daba ngoba isidumbu sihlale amahora ayisishiyagalombili amaphoyisa engezi ukuzosithatha. Uma sesiyowalanda akhala ngokuthi abengakaze abikelwe,” kusho ilungu lomphakathi.
Kunxuswe noma ngabe ngubani owazi umndeni kamufi ukuba athintane neSolezwe ukuze ahlanganiswe nezihlobo zakhe ngoba abakwaNzama abanawo amandla okumngcwaba.